Isalathiso saseJapan seNikkei Index sophula zonke inkxaso | Ezezimali
Isalathiso saseJapan seNikkei Index sophula zonke inkxaso
Imarike yemasheya yaseJapan ithumele umqondiso ocacileyo kubatyali mali baseNtshona ngobusuku obandulela iKrisimesi kwaye ngokuqinisekileyo yayingenathemba kwaphela. Ngelinye lawona matontsi makhulu athe enzeka kule minyaka idlulileyo kwaye ngokungathandabuzekiyo aya kuthi aphele echaphazela iimarike zentengiso zelizwekazi elidala kwaye kunjalo naseSpain. Kwi ukuhla kwezinto into engazange ibonwe kwezi nyanga zidlulileyo kunye nokuzivocavoca urhwebo. Ingathi uyoyika eyona nto imbi kakhulu, yalatha abanye babatyali mali abanamava ngakumbi kwiimarike.
Oku kwehla kwezabelo zaseJapan kwandulelwa yenye ukwehla okubukhali eWall Street. Apho amagama enkokeli ephezulu ye-United States Federal Reserve (eyondliweyo) ingamkelwanga kakuhle ziiarhente ezahlukileyo zemali malunga nomgaqo-nkqubo wezemali oza kwenziwa kwelinye icala leAtlantic. Kwaye noMongameli uDonald Trump ngokwakhe kuye kwanyanzeleka ukuba angenelele xa kujongwa ezi ziganeko zithatha kwezi ntsuku zikhethekileyo.
Ngayiphi na imeko, inye into eqinisekileyo yokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi bayayazi kwaye kulo nyaka abazukufumana okulindelweyo Irally yeqela lekrisimesi. I-rally elungileyo, ewe, kodwa ngokuthambeka okuphawulekileyo, ngamandla okungaqhelekanga kubonwe kwiinyanga nje ezidlulileyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba uninzi lwentengiso yamasheya yamazwe aphesheya izakuphela inyanga kaDisemba ngelahleko ezikufutshane ne-10% nakwezinye iimarike zesitokhwe nangakumbi ngamandla. Ngamanye amagama, imbonakalo engathandekiyo yecandelo lotyalo-mali lwestokhwe esinamandla.
1 IJapan Stock Exchange inika isaziso
2 Iya kuchaphazela iimarike zentengiso zaseYurophu
3 Izizathu zale mpendulo
4 Uqoqosho lwaseJapan luqhuba kakuhle
5 Amanqanaba kumanqaku angama-20.000
6 Imfazwe yorhwebo phakathi kwamagunya
IJapan Stock Exchange inika isaziso
I-Nikkei, isalathiso esibandakanya ezingama-225 ezona zihloko zininzi zemakethi yaseJapan, ilishiyile eli nyathelo ngoMvulo ngaphezulu kancinci kune-5%. Ukuya kwinqanaba lokuba liye kumanqaku ayi-19.155,74. Ukophula inqanaba elibalulekileyo kunye nengqondo yamanqaku angama-20.000 25 kwaye kuyo nayiphi na imeko ikwinqanaba elisezantsi ukusukela nge-XNUMX ka-Epreli kunyaka ophelileyo. Nangona eyona nto imbi kakhulu kukuba isalathiso sesitokhwe saseJapan singenise umdyarho ongaphezulu kobungozi ongaziwayo ukuba uza kuthatha malini kwiinyanga ezizayo okanye kwiminyaka.
Ukusuka kule meko ngokubanzi egxile kwimpuma ekude, Kuyaziwa ubuncinci ukuba oku kubuyela umva ngemini enye yeyona ibhengeziweyo ukusukela nge-9 kaNovemba ka-2016. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu ziziphumo zedomino zoku kuthi oku kwehlayo kwizabelo zeJapan kuvelise kwezinye iimarike kufutshane neSpanish. Kunyaka osele uza kuphela kwaye akukho nto inokulindelwa.
Iya kuchaphazela iimarike zentengiso zaseYurophu
Ngenxalenye yalo, i Umxholo omkhuluNgokubanzi kuneNikkei 225 kwaye ebandakanya amafemu angamawaka amabini anemali enkulu yentengiso, ilahlekile i-4,88%. Oko kukuthi, phantse amanqaku angama-75, abonisa ubunzima obukhulu bezi ntshukumo kwiimarike zezemali. Ngendlela, engalindelwanga ngenxa yokuqina kwabo okhethekileyo kunye nokuqaqamba kokuwa okwenzeka ekuqaleni kweeholide zeKrisimesi. Ngoku kuya kufuneka silinde impendulo yeemarike ze-equity zaseYurophu, nangona kungekho nto intle kulindeleke. Hayi kangako.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba kwiimarike zesitokhwe zaseYurophu unyaka uphelile. Zimbini kuphela iiseshoni zokurhweba ezishiyekileyo, namhlanje ngoLwesine nangomso. Kuba kusuku lokugqibela lonyaka, kuyinyani ukuba iimarike zentengiso zasentshona ziya kuvula iingcango zazo, kodwa embindini weseshoni, njengoko kwenzekileyo nge-Eva kaKhisimusi. Nangona kunjalo, abatyali zimali abancinci nabaphakathi boyika eyona nto imbi, kunye nokuhamba ngabo bonke abatyali mali abaya kukhetha ukuhlala kwimeko ye ukuthengiswa ngokupheleleyo. Ngaphandle kwengcebiso ezithile eziphikisanayo ezithi zisungulwe ngabalamli abathile bezemali.
Izizathu zale mpendulo
Abahlalutyi bathi ukubuyela umva namhlanje eTokyo ngenxa yezo ngxaki, zisalindelwe, kwaye kuhlaselo olutsha olwenziwe ngumongameli wase-US, uDonald Trump, ngokuchasene nosihlalo weFederal Reserve (Fed), Jerome Powell. Kodwa yonke into ibonakala ngathi oonobangela banzulu nangakumbi kwaye yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba imeko ethandabuzekayo iyaphungulwa kuqoqosho lwamanye amazwe kule minyaka imbalwa izayo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi kususela kwiziseko zexabiso lemarike yemasheya.
Ngayiphi na imeko, kukho eqinisekileyo kwaye oko kukhula kwezoqoqosho eziphambili zamanye amazwe izakuba sezantsi ngaphezu kwale iphuhlisiweyo ngexesha kushiyeke iintsuku ezimbalwa kakhulu ukudlulela kubomi obungcono. Kuba, enyanisweni, uphononongo lokuba yonke imibutho yamazwe aphesheya ibikhomba ukuya kweli cala. Ngokuhla kwezantsi kuqikelelo lwezoqoqosho oluqala kulo nyaka. Nangona okwangoku ngaphandle kokuchaza ingxaki enkulu kwezoqoqosho, nangona kukho iimpawu ezikhathazayo.
Uqoqosho lwaseJapan luqhuba kakuhle
Le mpendulo yeemarike zezabelo zaseJapan ayihambelani neengxelo ze Inkulumbuso yaseJapan u-Abe. Ibhekisa kwinto yokuba impilo yoqoqosho lwaseAsia lubalasele kwaye zonke iiparameter zoqoqosho ziphantsi kolawulo. Ke kutheni le nto imakethi yesitokhwe yaseJapan ikufumene oku kwehla kwixabiso lokhuseleko elidweliswe kwiimarike zezemali? Izizathu zingafunyanwa kwindawo exogenous kunezinto ezingapheliyo, apho izinga lokunyuka kwe-United States Federal Reserve linento yokwenza nayo. Ngokukodwa kwihlabathi lehlabathi jikelele njenganamhlanje.
Ke ngoko, imarike yemasheya kweli lizwe ithatha imeko entsha kumgaqo-nkqubo wezemali onokuthi uchaphazele noqoqosho lwayo. Yiyo loo nto abatyali mali kule ndawo begqibe ekubeni lixesha elichanekileyo ukuqokelela izibonelelo kwaye uhlale unamanzi ebusweni kwinto enokwenzeka ukusukela ngoku. Ngokukodwa ukusukela ukuba icandelo lobuchwephesha kwezona zinto ziphambili zisitokhwe liye lonakala kwiiyure nje zamva nje.
Amanqanaba kumanqaku angama-20.000
Kwaye ayikhathaleli into yokuba i-Nikkei iphule inkxaso efanelekileyo ebinayo kumanqaku angama-20.000. Le nyani inokubangela ukuqhubeka kokuwa ukuya kuthi ga kwinqanaba elingaziwayo kude kube ngoku. Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba le ntengiso yezemali inamava abalulekileyo ukulayishwa ukusukela ngo-2013 kwaye kusengqiqweni ukuba kukho ulungiso olomeleleyo lokuziqhelanisa nomthetho wonikezelo kunye nemfuno. Ngayiphi na imeko, okona kubi kunako konke kusekwe kwinto yokuba yaphule isikhokelo esinyusa ixesha elifutshane neliphakathi ebinalo kude kube ziintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngokwenyani oku kuthetha ukuba kuya kufuneka siziqhelanise nokubona ukuwa kule marike yezemali kubalulekile ngokukodwa kwilizwe liphela. Nangona imisebenzi eqhutywa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi incinci, ngaphandle kwento yokuba bekukho ixesha apho zabo inkalo yobugcisa bayamenywa ukuba bathathe izikhundla kuyo nayiphi na iprofayili yotyalo-mali. Ngoku akukho mathandabuzo ukuba kuyakufuneka kuphononongwe esi sicwangciso kunye nokukhetha iimodeli ezintsha ukwenza ukuba imali ekhoyo ifumaneke.
Imfazwe yorhwebo phakathi kwamagunya
Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha, akukho mathandabuzo ukuba kunokwenzeka ukuba kubekho imfazwe yorhwebo phakathi I-United States ne China inokukhuthaza ukwehla kwimarike yaseJapan yokuqina kwiiveki ezizayo. Ayothusi into yokuba yenye yeemarike zezemali ezivezwe kakhulu kule meko evela ngenxa yolu ngquzulwano lwezorhwebo. Ukuya kwinqanaba lokuba imarike yayo yesitokhwe inokonakala ngakumbi kunaleyo yamazwe asentshona kwaye ngakumbi lawo kwilizwekazi elidala.
Ke ngoko isilumkiso Kufanele ukuba ibeyinto eqhelekileyo kwizenzo zakho kwizabelo zamandla ombane waseAsia. Okwangoku, kuninzi ongaphulukana nako kunenzuzo. Ayisiyondawo apho ungalathisa khona ukonga kwakho kuba umngcipheko uphezulu kakhulu kwaye ayifanelekanga ukwenza iintshukumo zokuthenga kule marike yezemali. Ngokukodwa, emva kokophula amanqanaba abalulekileyo ebenama-20.000 amanqaku, njengoko besesiphawulile ngaphambili.
Kwimeko nayiphi na into, kuya kufuneka ukuba unike ingqalelo ekhethekileyo ekuziphatheni kwayo kwiintsuku zokuqala zonyaka omtsha oza kufikelela kubo bonke abatyali mali. Banokunika omnye umqondiso malunga nokuhamba okunokuthi le ngxowa ithathe kude lee neyethu. Nangona uqikelelo alunasigqibo kwaphela malunga nokunyuka okuthe kratya kwintengiso yesitokhwe yaseJapan. Ngale ndlela, eyona nto icetyiswayo kukuba uphume kule marike yemali ifanelekileyo, nokuba kukho ukubuyela okuqinileyo kuqikelelo lwezabelo zeenkampani zaseJapan. Ukuze ngale ndlela, ukonga kungakhuselwa ngokukuko, oko kukuthi, konke kukuthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Isalathiso saseJapan seNikkei Index sophula zonke inkxaso
Izipho ezi-7 eziphambili zeMagi ezinokuzisa kubatyalomali
Ukudityaniswa kwezindlu nomhlaba